Umaka: clearslide | Martech Zone
Injini ye-analytics yengxoxo kaGong ihlaziya izingcingo zokuthengisa ezingeni ngalinye nelilinganiselwe ukukusiza uqonde ukuthi yini okusebenzayo (nokuthi yini okungasebenzi). I-Gong iqala ngokuhlanganiswa kwekhalenda elula lapho ihlola khona ikhalenda ngalinye labathengisi abafuna ukuhlangana okuzayo, izingcingo, noma amademo okurekhoda. UGong ubuye ajoyine ikholi yokuthengisa ngayinye ehleliwe njengomuntu oze emhlanganweni ozoqopha iseshini. Kokubili umsindo nevidiyo (njengokwabelana kwesikrini, izethulo, namademo) kuyarekhodwa
Ngokuya ngocwaningo olwenziwe yiForrester, amaphesenti angama-62 abaholi bezentengiso bafuna ukubonakala okwengeziwe emisebenzini yokuthengisa, kepha kuphela amaphesenti ayisi-6 aqinisekile ukuthi athola imininingwane efanele. Ngenxa yalokho, abaholi bezentengiso balwela ukuqonda ukuthi iziphi izinqolobane, amaqembu, nokuqukethwe empeleni okusebenzayo emjikelezweni wokuthengisa - okungenani kuze kutholakale amathuba noma kulahleke. I-ClearSlide, ipulatifomu yesethulo esivunyelwe ukuthengisa, ikhiphe i-Engagement and Follow, izici ezintsha ezisiza abaholi bezentengiso ukuqapha, ukuhlaziya, kanye